खेलकुद Archives - ramechhapkhabar.com
विश्वकै धेरै कमाउने खेलाडीमा मेसी बने पहिलो, रोनाल्डो कति स्थानमा ?
२९ वैशाख, काठमाडौं । लियोनेल मेसी सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने खेलाडी बनेका छन् । फोर्ब्सको पछिल्लो अपडेट अनुसार मेसीले लेब्रोन जेम्सलाई पछि पार्दै फोर्ब्सको सबैभन्दा धेरै कमाउने खेलाडीको सूचीमा पहिलो स्थानमा पुगेका हुन् । त्यस्तै अर्का फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यस सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेका...
आईपीएलमा मुम्बईको अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन, अंक तालिका कुन टिम शीर्ष स्थानमा ?
२४ चैत, काठमाडौं । भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी–२० क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सले अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन गरेको छ । मुम्बईले अहिलेसम्म शुरुआती तीन वटै खेल हारेको छ । बुधबार राति पुनेमा भएको खेलमा मुम्बई कोलकाता नाइट राइडर्ससँग पराजित भयो । कोलकाता भने मुम्बईलाई...
फिफा विश्वकप कतारमा प्रयोग हुने बल सार्वजनिक, इतिहासकै सबैभन्दा छिटो गुड्न सक्ने
१७ चैत, काठमाडौं । फिफा विश्वकप कतार २०२२ मा प्रयोग हुने अफिसियल बल सार्वजनिक गरिएको छ । कतारमा आयोजना हुने विश्व फुटबलको महाकुम्भ मेलामा प्रयोग हुने बल बुधबार सार्वजनिक भएको हो । ​एडिडासको उत्पादन गरेको ‘अल रिल्हा’ नामक बलको प्रयोग हुने भएको हो ।...
आज मलेसिया र पीएनजी खेल्दै
१५ चैत, काठमाडौं । त्रिकोणात्मक टी–ट्वान्टी अन्तराष्ट्रिय सिरिज अन्तर्गत आज मलेसिया र पपुवा न्युगिनी (पीएनजी) बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । सिरिजको दोस्रो खेलमा दुई टोली आमने सामने हुन लागेका हुन् । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा मलेसिया र पीएनजीबीचको खेल १२ः३० बजे सुरु हुनेछ । पहिलो खेलमा...
१२ चैत, काठमाडौं । दीपेन्द्रसिंह ऐरीले पपुवा न्यूगिनी (पीएनजी)विरुद्ध पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय शतक प्रहार गरेका छन् । शनिवार टीयू क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भइरहेको क्रिकेटमा उनले १३६ बलमा ६ चौका प्रहार गर्दै शतक पूरा गरेका हुन् । यो सँगै ऐरी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक प्रहार...
आइपिएलमा नयाँ नियम लागु, उद्घाटन खेलमा चेन्नई र कोलकत्ता भिड्दै
१२ चैत, काठमाडौं । विश्वकै चर्चित टी-२० क्रिकेटको लिग इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को १५औं सिजन आजबाट सुरु हुँदैछ । लिग राउण्डका सबै ७० खेल मुम्बईका तीन र पुणेको एउटा स्टेडियममा खेलाइदैछ । कोरोनाका कारण युएईमा आईपीएल २०२० आयोजना भएको थियो । त्यसपछि २०२१...
टी २० विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना अधुरै
१० फागुन, काठमाडौं । ओमानमा जारी टी २० विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल खेलमा नेपाल यूएईसँग पराजित भएको छ। हारसँगै यसै वर्ष अस्ट्रेलियामा हुन लागेको टी २० विश्वकप खेल्ने नेपालको धोको पुरा नहुने भएको छ। समूह चरणका तीनवटै खेल जितेर सेमिफाइनल पुगेको नेपालले युएईले दिएको...
आज यूएईलाई हराए नेपाल विश्वकपमा
१० फागुन, काठमाडौं । आइसीसी टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोटको पहिलाे सेमिफाइलनमा मंगलबार सयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाल जितसँगै दोस्रो पटक विश्वकप पुग्ने लक्ष्यमा हुनेछ । ओमानको मस्कटस्थित अल अमेरत क्रिकेट मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३:४५ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।...
टी-२० विश्वकप छनोटमा नेपालको सानाधार विजयी सुरुआत
६ फागुन, काठमाडौं । फाईल फोटो। आईसीसी टी २० विश्वकप छनोट अन्तर्गतको आज सम्पन्न खेलमा नेपालले घरेलु टोली ओमनलाई हराएको छ। ओमनस्थित अलअमेरत स्टेडियममा सम्पन्न खेलमा नेपालले ओमनमाथि ३९ रनको जित निकालेको हो। टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै...
टी–२० अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा सन्दीपले राखे यस्तो रेकर्ड !
२ फाल्गुन, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने टी–२० अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा ५० विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन् । ओमानमा भएको चारदेशीय टी–२० क्रिकेट शृंखलाको अन्तिम खेलमा आयरल्यान्डविरुद्ध एक विकेट लिँदै सन्दीपले यो रेकर्ड राखेका हुन् । सन्दीप विश्वमै टी–२०...